Farmaajo oo BF ka codsaday in Muqdisho ay matalaad ku yeelato AQALKA SARE
Puntland oo sheegtay inay dishay Madaxii Qaraxyada Shabaab ee Gobolka Mudug
Home » Entries posted by CCC (Page 4)
Stories written by CCC
Dawladda Somaaliya ayaa ku eedaysay mid ka mid ah labada shrikadood oo lagu magacaabo Buff AIR …
Comments Off on Soomaaliya oo shatiga duulimaad kala laabatay shirkado Kenyan ah
Warbixin: Saddex Baahiyood oo ka dhashay Fatahaaddii Qardho
Duqa Degmada Qardho ee Xarunta Gobolka Karkaar Cabdi Siciid Cismaan, ayaa warbixin dhammaystiran ka soo saaray, Khasaaraha ka dhashay Daadadkii Magaalada ku fatahay 27-April ee sannadkan 2020.
Warbixinta ka soo baxday Xafiiska Duqa Degmada Qardho, a…
Comments Off on Warbixin: Saddex Baahiyood oo ka dhashay Fatahaaddii Qardho
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa lagu wadaa in uu Maanta la kulmo isimada dhex-dhexaadinaya isaga iyo Madaxweyne ku xigeenka Axmed Cilmi Cismaan si loo xalliyo khilaafka ku salaysan Awoodaha Dastuuriga ah ee u dhexeeya labada mas’uul….
Comments Off on Wararkii u dambeeyay dhex-dhexaadinta Deni iyo Karaash
Somaliland oo dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wadda degaanka Tukaraq
Wararka ka imaanaya degaanka Tukaraq ee gobolka Sool ayaa sheegaya in ciidamada Somaliland ay halkaasi dhaq dhaqaaqyo kala duwan ka wadaa saaka oo Isniin ah.
Dad ku sugan degaanka Tukaraq ayaa soo sheegaya in ciidamada Somaliland ay saaka wadaan…
Comments Off on Somaliland oo dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wadda degaanka Tukaraq
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo maanta xarunta Baarlamaanka kula ballansanaa Isimada iyo Guddoonka Golaha Wakiilada ayaa kulankaasi ka cudur-daartay.
Madaxweyne Deni ayaa Isimada iyo Guddoonka Baarlamaanka ku soo wargeliyay in u…
Comments Off on Kulankii Madaxweyne Deni iyo Isimada oo baaqday
Xisbiga Wadajir oo taageeray hadal ka soo yeeray Ra’iisul wasaare Khayre
Xisbiga Wadajir, ee uu hoggaamiyo Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, ayaa soo dhoweeyey hadalkii Ra’iisul wasaare Khayre, oo muujiyay in ay Xukuumaddiisa ka go’antahay, in doorashadu wakhtigeeda ku dhacdo.
Xisbiga ayaa sheegay, in uu d…
Comments Off on Xisbiga Wadajir oo taageeray hadal ka soo yeeray Ra’iisul wasaare Khayre
Madaxweyne Deni oo saaka la kulmaya Isimadii dhex-dhexaadinta waday
Madaxweynaha Dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa sida qorshaysan saaka oo Axad ah la kulmaya qaar kamid ah Isimada Dhaqanka Puntland oo ku hawllan dhex-dhexaadinta khilaafka isaga iyo Madaxweyne ku xigeenka Axmed Cilmi Cismaan.
Comments Off on Madaxweyne Deni oo saaka la kulmaya Isimadii dhex-dhexaadinta waday
Al-shabaab oo xukun dil ah ku fulisay nin ku eedaysnaa Tafaaful
Maxkamad ay leeyihiin malayshiyaadka Al-shabaab oo ka dhisan gobolka Shabeellada hoose ayaa laga soo xigtay in ay xukun dil ah ku fulisay nin lagu helay saaxirnimo.
Warbaahinta taageerta Al-shabaab ayaa sheegtay in gelinkii dambe ee shalay xukun…
Comments Off on Al-shabaab oo xukun dil ah ku fulisay nin ku eedaysnaa Tafaaful
Dab ka kacay xarunta shirkadda SOMTEL ee Boosaaso
Xarunta Shirkadda SOMTEL ee dabku qabsaday
Wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, ayaa sheegaya in saaka aroortii hore uu dab ka kacay, xarunta weyn ee shirkadda SOMTEL ku leedahay gudaha Boosaaso.
Xarunta Boosaaso oo…
Comments Off on Dab ka kacay xarunta shirkadda SOMTEL ee Boosaaso
Gabdho Soomaaliyeed oo ku dayacnaa Sacuudiga oo dalka lagu soo celiyay
Muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xayirnaa waddanka Sacuudi Carabiya ayaa gelinkii dambe ee Shalay dib loogu soo celiyay magaalada Muqdisho sida laga soo xigtay mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Federaalka Soomaaliya.
Muwaadiniintaas ayaa la…
Comments Off on Gabdho Soomaaliyeed oo ku dayacnaa Sacuudiga oo dalka lagu soo celiyay